Chakavanzika cheSEM: Mhedzisiro yeGoogle Inoiswa | Martech Zone
Mugovera, June 20, 2009 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Shamwari yangu yakagovana mimwe mhedzisiro yemari yake yemakore maviri apfuura nemaText Link Ads, sevhisi kwaunogona kutenga nekutengesa zvinongedzo. Vaparidzi vanotengesa zvinongedzo kungoita mari - uye pane mukana chaiwo weblog rakagadzwa rine yakanaka inotevera uye chinzvimbo.
Kune Vashambadzi, iwo mukana ndewekuti shandisa backlinks kutyaira yavo organic chinzvimbo mune dzekutsvaga injini. Google's pagerank algorithm yakanyanya kuremerwa backlinks, dzimwe nguva inoita senge iri nani zvisinei nemhando yezvirimo pane yako saiti. Dzidziso ndeyekuti vaparidzi vepamhepo vepamhepo vane hukama hwakakura zvakasikwa vanokwezva zvinongedzo… uye yavo yekutsvaga yekutsvaga chinzvimbo chinokwira kumusoro.
Nhamba inokura yevanoshambadzira vanorwara uye vaneta nekumirira uye ivo vari kungobhadhara kuti vawane chinzvimbo chiri nani. Kutyaira yakawanda yemukati zvemukati ibasa chairo rinogona kusabhadhara kwemwedzi… kutenga backlinks kunogona kuwana mhedzisiro inokurumidza uye inoshamisa.
Kuburitsa zvakabhadharwa zvinongedzo pasina kuratidza rel = "isina" mune yako anchor tag kutyora kwe Mitemo yeBasa yeGoogle. Google inoranga uye de-index nzvimbo dzavanofunga kuti dzakabhadharira ma link pavari. Zvekuburitswa zviri pamutemo pamhepo, mari yacho inogona kuvhara chero mari inopihwa neGoogle Adsense.
Mari yake muna2008 yaive madhora zviuru zvinomwe… zvichienzaniswa neinenge $ 7,000 1,000 muGoogle Adsense. Kusaipa.
Mukuona kwangu kwekuzvininipisa, yega yega yakakomba yekutsvaga yekushambadzira yakasimba ikozvino ine backlinking zvirongwa muhomwe yavo yekumashure kubatsira kuburitsa mhedzisiro. White ngowani SEO haichashandi nekuti Google ikozvino yazara nemapurogiramu akabhadharwa backlink achityaira masayiti akapfuma mumhedzisiro yepamusoro yekutsvaga.
Mune mawonero angu, Google yakanyanya kubirirwa.
Kudzokorora rondedzero yenzvimbo dzekuenda munzvimbo dzake dzakabhadharwa kunonakidza. Haisi iyo huru spam uye inoita mari izvozvi kuwanda imomo, zviri pamutemo akatendeseka mabhizinesi. Kunyangwe vari ivo vane basa rakanangana nekutenga zvinongedzo kana ivo zvisina kunangana vakatengwa nekambani yavo yekutsvaga injini yekushambadzira… handizive. Asi ivo vari kubhadhara, uye mhedzisiro yeGoogle inoshandiswa nekuda kwayo.
Google yakasimbisa shanduko yenguva dzose muma algorithms ayo. Pakutanga gore rino, Google yakatosimbisa kuti iwo aive akanyanya kurema mabrands. Izvo zvaive zvekuvandudza kukosha kwemhedzisiro? Kana yaive yekuedza kuzvidzivirira kubva pakurwiswa kwezvirongwa zvekubatanidza zvakabhadharwa zvinobuda pawebhu rese?
Pfungwa yekupedzisira pane izvi… handina chokwadi chekuti zviri mukufarira kwako kugamuchira mari yezvikwata zvakabhadharwa. Kunyange zvichinyatso kukuwanira de-indexed kana ukabatwa (izvo zvinoita kunge zvisingaite kazhinji), kuunganidza boka rezvinongedzo kumasayiti ane chinzvimbo chakaderera uye, pamwe, hapana kukosha kunogona kukuvadza yako saiti chinzvimbo. Mumuenzaniso weshamwari dzangu pamusoro, anobvuma kuti pagerank yake yawa asi haana kukwanisa kuziva kuti sei.
Acharega kubhadharirwa ma link here? Achiri kuti mari yakanyanya kunaka kuti tirambe izvozvi.
Tags: backlinkinggoogle adsenseakabhadhara zvinongedzoiro bhukuchinyorwa chinobatanidza ads
Jun 21, 2009 pa11: 25AM
Ndiri kuvaka iro rezwi reWordPress uye dzidziso saiti, iyo yakaverengerwa index kubva munaNdira. Ndine makumi mashanu nemakumi mashanu emhando yepamusoro, mamwe acho ari 52+ mazwi, ese epakutanga zvemukati, ese ari mukati akabatanidzwa kupa yakasimba rondedzero dhizaini, uye vese vane huwandu hwakaringana hwehukama hunobuda (iwebhu, mushure mezvose).
Inenge zvese zvinyorwa zvine zviito zvinogoneka, chimwe chinhu icho muverengi anogona Kuita Izvozvi.
Kunyangwe nehunhu hunoshamisa, vangangoita maviri ezvinyorwa izvi anozviita mumapeji epamusoro zana paGoogle.
Izvo zvandaisazoita hanya nazvo zvakanyanya pamusoro pe… kunze kwe90% yemapeji ari pamusoro zana mhedzisiro… zvakazara marara. Huviri manhamba manhamba spam mablog.
Zvino, saenzi, ndakadzidziswa kucherechedza.
Kuona kwangu ndekwekuti Google haina nzira chaiyo yekuyera mhando kana kubatsira kune vaverengi.
Sezvandakareva, ini handina basa zvakanyanya zvekuti ndakaderera. Nyama yangu yenyuchi ndeyekuti ndiri kubatidzwa nemabhuga e spam.
Ndinoziva kuti mumisika "inopisa", kana Google isingazvizive izvi, vaparidzi vadiki vepamusoro
ruzivo rwemhando yepamusoro harungawanikwe uchishandisa organic search. Kunyangwe izvi zvinoshanda
Google mubvunzo wakashama. Zvirokwazvo hazvizoshandira vaverengi zvakanaka.
Jun 21, 2009 pa 11: 25 PM
Yako inyaya yandinoona zuva nezuva, Dave. Vaparidzi vakakura vane zvemukati zvemhando havasi kuverengerwa. Kutya kwangu, sezvandakanyora pamusoro, ndekwekuti iyo sisitimu yese iri kushandiswa kuburikidza neanobhadharwa marongero ekubatanidza. Google inoda imwe hurongwa pane izvi - kusanganisira kuisa huremu hwakawanda pakukoshesa kwepeji pane kufarirwa.
Jun 21, 2009 pa 11: 36 PM
Kana izvi zvikaramba zvichizadzikisa hwindo rezvemabhizimusi: diki fry haizokwanise kubvisa chipingamupinyi chekupinda nebasa rakaoma uye chigadzirwa chemhando yepamusoro. Ipapo isu todzokera kwatakatanga kubva.